Different Between Active Directory and Domain Controller — MYSTERY ZILLION
Different Between Active Directory and Domain Controller
July 2010 edited September 2010 in Windows Server
ဒီအကြောင်းကိုကျနော် စာတော့ဖတ်ပြီးပါပြီ .. ကျနော် ပြန်ရေးလိုက်ရင်လဲ . . ကျနော်မှားနေရင် တခြားမသိတဲ့သူတွေအတွက်နောက်အရှက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. အဲ့တော့ . . သေချာသွားအော် .. သူ တို ့နှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားချက်လေးပေါ့ . .ရှင်းပြပေးစေခြင်ပါတယ် .. မရှင်းပြခြင်ရင်လဲ .. googling လုပ်ဖို ့တော့အကြံမပေးကြပါနဲ ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ .. ဒီမှာနားလည်အောင် . . သိခြင်လို ့သာ ဒီဖိုရမ်ကြီးကို အားပေး၀င်ရောက်တာပါ . . ဒီမှာလာမေးတဲ့သူတော်တော်များများလည်း .. googling လုပ်ပြီးလို ့သိပ်မရှင်းကြတဲ့လူတွေလို ့ထင်ပါတယ် .. ဒါကကျနော် အကြံပေးရုံသက်သက်ပါ .. ဖိုရမ်အတွက် .. အက်ဒ်မင်များအတွက်ပါ . . ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ::rolleyes:
Active Directory role ကို run နေတဲ့ server machine ကို domain controller လို့ခေါ်တာ။ ပြောရရင်အတူတူပဲ။
Active directory ဆိုလို. ကျနော်လည်းမရှင်းတာရှိလို.ပါ။ Windows server 2003 မှာ dcpromo run ပြီးတော့ client စက်ကို manage လုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ Active directory users and computers မှာလည်း အဲဒီ client စက်ရဲ. computer name ပေါ်ပါတယ်။ manage လုပ်တာ RPC service is unavailable ဆိုပြီး ပေါ်နေပါတယ်။ စက်နှစ်စက်လုံးမှာလည်း RPC နဲ. RPC locator service တွေကို start လုပ်ထားပါတယ်။ ကူညီ စဉ်းစားပေးကြပါခင်ဗျာ။